Ku keydi tamarta shaqada - Xarunta EcoTechnology
Keydso Tamarta ShaqadaSteven Hoffman2021-12-15T10:49:36-05:00
Hagaajinta Waxqabadka Ganacsiga
Qiimaynta Tamarta Qoysaska Badan
waxay ku furantahay daaqad cusubBarnaamijka Tamarta Beerta Mass
Kordhinta waxtarka tamarta ayaa yareyn doonta raadadka kaarboonkaaga iyadoo laga helayo faa'iidooyinka degdegga ah ee biilasha tamarta ee la dhimay iyo waxqabadka ganacsiga oo la hagaajiyay. Xarunta EcoTechnology waa ilo aad u wanaagsan oo loogu talagalay ganacsiyada ama milkiilayaasha guryaha kuwaas oo raadinaya inay kordhiyaan waxtarkooda tamarta, badiyaaana leh wax yar ama aan lahayn kharashka hore.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira dhiirigelinno badan oo koronto oo ka dhigaya wax ku oolnimada tamarta mid ka jaban sidii horeba ganacsiyada. Xarunta EcoTechnology waxay kaa caawin kartaa adiga iyo ganacsigaagaba inaad ku dhex socotaan dhiirigelinta, mudnaanta u siisaan fursadaha isla markaana u yeeshaan qorsheyaal ku saabsan hagaajinta qalabka mustaqbalka. Wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u hesho caawimaad farsamo fadlan nala soo xiriir.
Teknolojiyada keydinta tamarta
Kuleylka Biyaha Kuleylka ah
Xakamaynta Dib-u-cusboonaysiinta Kuleylka
Adeegyada Keydinta Tamarta
Caawinta u qalmida mashaariicdaada dhiirigelin bilow ilaa dhammaad
Dib-u-qiimeynta iyo dhiirigelinta hagitaanka barnaamijka
Tallaabooyin badbaadin degdeg ah oo fudud
Waa kuma Adeeg Bixiyuhu?
413.727.3142 wuxuu furayaa wacdi taleefan
Haddii aad tahay macmiil Eversource waxaad xaq u yeelan kartaa barnaamijka Waxtarka Tamarta ee Eversource.
Qiimo la'aan adiga, Xarunta EcoTechnology waxay kaa caawin kartaa meheraddaada inay isku waafajiso kor u qaadista waxtarka tamarteeda iyo keydka Eversource's barnaamijyada lacag celinta iyo dhiirigelinta. Nala soo hadal MAANTA!
Eversource waxay aqoonsan tahay doorka gaarka ah ee shaqaalaha Xarunta EcoTechnology ku leeyihiin ilaalinta tamarta. Xarunta EcoTechnology waxay si dhakhso leh u qiimeyn kartaa awooda keydinta tamarta waxayna tilmaami kartaa hagaajinta u qalma dhiirigelinta maaliyadeed ee ku aaddan kharashka mashruucaaga.
Foomka Xiriirka Qiimaynta Tamarta Ganacsiga
Buuxi foomka si aad u bilowdo.
Cinwaanka Street Cinwaanka Line 2 dareenka Gobolka / Gobolka / Gobolka ZIP / Koodhka Boostada AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaJacaylkuAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius iyo SabaBosnia iyo HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilTerritory British Indian OceanBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileShiinahaChristmas IslandCocos IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic of theCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicIvory CoastDenmarkJabuutiDominikaDominican RepublicEcuadorMasarEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatini (Swaziland)ItoobiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFaransiis PolynesiaFaransiis Southern DhulalkaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard iyo McDonald IslandsQuduuska SeeHondurasHong KongHungaryIcelandHindiyaIndonesiaIiraanCiraaqIrelandIsle of ManIsraa'iilItalyJamaicaJapanJerseyUrdunKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanJamhuuriyadda Lao Dadka DemocraticLatviaLubnaanLesothoLiberiaLiibiyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaIslands MarshallMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandKuuriyada waqooyiNorthern Mariana IslandsNorwayCumaanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruFilibiinPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQadarRomaniaRussiaRwandakulanSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre iyo MiquelonSaint Vincent iyo Grenadines ahSamoaSan MarinoSao Tomé iyo PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaJasiiradaha SolomonSoomaaliyaKoonfur AfrikaSouth GeorgiaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard iyo Jan Mayen IslandsIswidhanSwitzerlandSuuriyaTaiwanTajikistanTansaaniyaThailandTimor Leste-TogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurkiga oo Caicos IslandsTuvaluJasiiradaha Yar ee MaraykankaUgandaUkraineUnited Arab EmiratesBoqortooyada IngiriiskaUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USWallis iyo FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabweÅland Islands Country
Wax kasta oo aad rabto inaad ogaato?
800.944.3212wuxuu furayaa wacdi taleefan (Riix # 3 Ganacsi)
Haddii aad tahay macmiil Gaas Berkshire waxaad uqalami kartaa Barnaamijyada Waxtarka Gaaska GasNetworks® & Berkshire.
Gas Berkshire ayaa laga yaabaa inuu wax ku darsado 50% xagga kharashka rakibaadda. Keydinta tamarta barnaamijkan la ansixiyay waxaa lagu aqoonsan karaa inta lagu jiro qiimeynta. Codso qiimeyn MAANTA!
Gas Berkshire wuxuu siiyaa macaamiil u qalma macaamiisha ganacsiga iyo warshadaha dhiirigelin iyo dib u habeyn loogu rakibo qalabka waxtarka sare iyadoo loo marayo Barnaamijyadeeda Waxtarka Gas Gas iyo Shabakadda GasN Intaa waxaa dheer, Berkshire Gas wuxuu bixiyaa dhowr dadaal oo lala kaashanayo Guddiga Massachusetts Board of Regulations and Standards (BBRS), Berkshire Bank, soo saarayaasha qalabka iyo kuwo kale.
413.341.4wuxuu furayaa wacdi taleefan207wuxuu furayaa wacdi taleefan
Haddii aad tahay macmiil Gas Gas waxaad uqalami kartaa barnaamijyada waxtarka tamarta Liberty Gas.
Qiimo la'aan adiga, Xarunta EcoTechnology waxay kaa caawin kartaa ganacsigaaga inuu isku waafajiyo kor u qaadista waxtarka tamarta iyo keydka Liberty Gas ' barnaamijyada lacag celinta iyo dhiirigelinta. Nala soo hadal MAANTA!
Gas Liberty wuxuu aqoonsan yahay doorka gaarka ah ee shaqaalaha Xarunta EcoTechnology ku leeyihiin ilaalinta tamarta. Xarunta EcoTechnology waxay si dhakhso leh u qiimeyn kartaa awooda keydinta tamarta waxayna tilmaami kartaa hagaajinta u qalma dhiirigelinta maaliyadeed ee dabooli kara 100% kharashka mashruucaaga.
Ama Wac: 855-472-0318wuxuu furayaa wacdi taleefan
Haddii aad tahay milkiilaha ama hawl wadeenka xarun qoysas badan degan yihiin oo leh shan (5) ama kabadan unugyada guriga ku jira, waxtarka tamarta waa inay qayb muhiim ah ka ahaataa qorshahaaga ganacsi. Iyadoo aan loo eegin dakhligaaga, lambarka sicirka, ama haddii dhismaha hadda jiro ama loo qorsheeyay dhisme, waxaad u-qalmi kartaa barnaamijyo lagu yareynayo isticmaalka tamarta xaruntaada.
Xarunta EcoTechnology waxay bixisaa Qiimeyn Tamar badan oo Qoys ah oo loogu talagalay xarumaha ku yaal galbeedka Massachusetts si loo ogaado fursadaha hagaajinta waxtarka tamarta kharashka badan leh.
Horumarka soo socda ayaa laga yaabaa inuu xaq u yeesho dhiirigelinta Mass Save:
Kobcinta & xakamaynta laydhka ku habboon tamarta
Qalabka kululaynta biyaha
Cabbiraadaha biyaha kulul ee gudaha: madax-dhaqe hoose oo qulqulaya, hawo-mareeno, iyo duub duub
Heerkulbeegyada barnaamijka ah
Qalabka kululeynta iyo kuleylinta waxtarka sare ee casriyeynta iyo kontaroolada
ENERGY STAR® qaboojiyeyaal u qalma iyo qalabka kale ee u qalma
Hagaajinta kale ee tamarta waxaa lagu go'aamiyaa saldhig gaar ah
Dhismayaasha leh afar ama ka yar unug halkii guri, fadlan booqo kan waxay ku furantahay daaqad cusub1-4 qiimeynta tamarta qoyska .
Barnaamijka Tamarta Beerta Mass
Waxaan u fidinaa adeegyo kala duwan bulshada beeralayda ah si loo yareeyo isticmaalka tamarta loona soo saaro tamar la cusboonaysiin karo oo diiradda saareysa keenista mashaariicda laga soo bilaabo fikradda illaa dhammaadka. Wixii macluumaad dheeraad ah oo dhameystiran oo ku saabsan barnaamijyada waxtarka tamarta beeraha, booqo waxay ku furantahay daaqad cusubBarnaamijka Tamarta Beeraha Massachusetts ama hadda naga soo wac 413-727-3090wuxuu furayaa wacdi taleefan.